Kofi tafura Vagadziri & vanotengesa - China Kofi tafura yefekitori
Bvisa kristaro yegirazi tafura yekoni
Bvisa girazi rekristaro girazi tafura ndiyo nzira kwayo yekugadzira elegancee mune chero nzvimbo. Raira yako yegirazi yepamusoro kune yako tafura yekudyira yegirazi, tafura yegirazi kofi, girazi tafura yegirazi, tafura yegirazi patio kana girazi rako repamusoro tafura. Tsika-yakagadzirwa zvakare gadzira yako nzvimbo runako uye yakasarudzika.
Kofi Tafura Fenicha Ine Epamusoro Girazi Yekugara Kamuri
Imba yekugara fenicha girazi tafura yekofi
Yakakura pamhando dzakasiyana siyana dzekushongedza, tafura yegirazi kofi inogona kubatsira kusona pamwechete zvidimbu zvekupedzisira zveimwe imba yekutandarira dhizaini. Asi ndeipi yakakodzera imba yako? Inzvimbo yako inoda girazi tafura yekofi iyo inobatsira kuchengetedza pfungwa yeupamhi kana kuti inogona kushuvira girazi rakashinga uye tafura yekofi yegoridhe iyo inozobira iko zvino kuratidzika? Chero nzira, yedu runyorwa iwe iwe wakafukidza! Nezvinhu zvese kubva kupurazi imba chic kusvika nyore nyore, une chokwadi chekuwana yakakwana iwe imba yekutandarira. Nokusanganisa iyo chaiyo girazi tafura yekofi, kwete chete iwe unozogara uine nzvimbo yekuzorora kapu joe, asi yako yemukati dhizaini inotaridzika kunge nyanzvi kupfuura nakare kose.
Inogona kuve muvara wakasiyana, saizi, ukobvu, isu tinogamuchira tsika dzakajairwa.
Iyo tafura yekofi iwe yaunoda kana iwe uri kutsvaga runako uye hunoshanda izvo zvisingazopfuure yako yekutandarira imba. Iyi tafura yegirazi ine mwenje uye ine mhepo yekushongedza inozosiya mukamuri ichinzwa yakafara uye isingazokanganisa kubva kune imwe yako yekushongedza.
Girazi Kudya Kwemanheru
Girazi redu rekukanda rinogona kuitwa mumhando dzakasarudzika, dzakaboorwa, dzakachekwa, dzakarukwa, dzakapendwa. Yekutsamwa, zvinoenderana nemapatani ari pagirazi pamusoro, ndapota taura nesu kuti uwane rumwe ruzivo Aqua clear / Ultra clear / Blue / Green / Grey / Tea / Painting / Printing
Smart yakasarudzika rectangular stainles simbi yakanyorova girazi pamusoro petafura yekofi
Girazi Kofi tafura
Tafura yekofi inowanikwa pachena kana mumutsetse girazi rine mavara, ine yepamusoro yakagadzirwa ne23 mm DV Girazi. Metal base inowanikwa mune opaque Titanium kana muBlack Glossy Nickel. Tsvaga isina mwaka isina chimiro newaves kofi tafura. Nyanzvi mune yehunyanzvi hunyanzvi hwemidziyo yegirazi, inoratidzira pamusoro isingadzvinyiriri, ine mitsetse isina kusimba inoisa chinhu chetsika chakatsetseka nehunhu uye nehupenyu.
Grey Crystal Girazi Round Kofi tafura